Ndakanyora tani yemabhorosi emapato.
Pamusoro pegore rapera ndoga, ndakabudisa zvishoma zviduku zvitatu pavhiki pano pa Quick Sprout. Dzimwe vhiki dzaive dzakawanda, dzimwe nguva dzine dzakawanda zvigaro pazuva.
Kana wakanga uchiverenga ma blogs kwekanguva ikozvino, unoziva kuti zvinhu zvose zvandinogadzira ndezvomugumo-zvakagadzikana-sekufanana nemashoko iwe uri kuverenga iye zvino.
Izvi zvinoreva kuti inowira pane imwe nzvimbo mu 1.800-3,000 + izwi rakare. Handisi kunyora zvidimbu 500-mazwi zvidimbu kuitira kushandura pamutengo wakakwirira.
Mumakore ose aya, ndakafukidza zvakawanda mu-zvakadzika nyaya pamusoro pekugadzirwa kwezvinhu, website optimization, kutendeuka, SEO, nedzimwe nyaya dzakabatana. Asi nhasi ndinoda kugoverana newe seSeO hack yakareba uye yakashata iyo inogona kunyatsovandudza kushanda kwehupenyu hwako.
Ndiri kutaura nezvekutumira mathesi.
Vamwe venyu vangave vakazivana izvi kupfuura vamwe. Ndine chokwadi kuti vamwe venyu vanotovashandisa mune zvinyorwa zvako, pasinei nokuti unoona SEO kukosha kana kwete.
Ndinoshandisa matheji muzvose zvandinoparidza, kusanganisira iyi chinyorwa chauri kuverenga iye zvino.
Chaizvoizvo, iwe uchavaona muhuwandu hwose sezvo tichienderera mberi. Ini ndichava nechokwadi kuti ndichava nehanya navo kuitira kuti muzive chaizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Saka tungamirai mutungamiri uyu kuti uone kuti unogona sei kuvandudza marongerwo ako nemusoro wematekisi.
Chii chinonzi musoro?
Tisati taenda mberi, regai tione kuti tose tine peji rimwe chete pano. Kusvika ikozvino mumutungamiri uyu, ndashandisa mabhii maviri emusoro:
H1 yehurukuro iri pamusoro peji (Nzira yekushandisa Heading Tags kuti Uwane mamwe Search Engine Traffic)
H2 pane iyi chidimbu (Chii chinonzi musoro?)
Ichava nezvimwe zvekare zvinoshandiswa mumutungamiri pamwe chete.
Nenzira, idzi ndeye HTML tags dzinotsanangura misoro pawebsite. Rega ndiparadze tsanangudzo iyoyo iwe pachako.
HTML (hypertext markup language) ndiyo mutauro unoshandiswa kugadzira mapeji pawebsite. Tags ndeye code iyo inoudza web browser kuti zvinyorwa zvinofanira kuratidzwa sei peji. Kune marudzi matanhatu eheading tags; H1-H6.
Mutengo mumwe nomumwe unogona kuverengwa kubva yakakwirira kuderera muchirongwa chekukosha, icho chinonyatsoratidzwa nehukuru.
Iwe unogona kuwedzera ma tags aya pane zvaunenge watanga usati washambadzira basa rako.
Pano paKutsvaga Mushonga, tinoshandisa WordPress. Asi ini handiwanzo kunyora mabloggi angu zvakananga pane iyo platform. Ndinoshanda kuGoogle Docs, nokuti ndinofunga kuti inoshandiswa-yakashanda pakunyoresa fomu yakareba.
Pasinei nokuti uri kushandisa Docs, Microsoft Word, kana chimwe chikwata chekubudisa zvigadzirwa, uchakwanisa kuwana izvo zvinyorwa zvitsva mumubha we menu. Hezvino izvo zvinoratidzika kuGoogle Docs:
Zvisarudzo zveH4 nepamusoro hazvisi kuonekwa kusvikira mushure mokuwedzera matanho eH3 kune zvamuri.
Hezvino izvo matambi anoita seanoita kana uri kushanda zvakananga muShokoPress.
Zvakare, zvinenge zvakajeka sezvazvinowanikwa.
Iwe unogona kuongorora kuti misoro inoshandiswa zvakanaka mukati mehutano hwako nekuona ikhodi yekodhi ye peji. MuShokoPress, tongobva kubva pane inoona mhariri kuenda kumunyori wekunyorera kuti uone HTML code.
Iwe unogonawo kutarisa mutsara wekodhi chero peji peji, kunyange kana yakabudiswa.
Somuenzaniso, regai titarise zvimwe zvinyorwa zvakabudiswa kare pano pa Quick Sprout. Heino mhemberero yandakanyora pamusoro online marketing yevakatanga.
Ndakatarisa mahedheni akasiyana pamusoro. Ndine chokwadi kuti iwe wakamboona zvinhu zvakadai sezvi (kunyanya pa Quick Sprout).
Iye zvino, iwe unogona kutarisa izvi uye funga kuti faira iri huru. Zvose zvinyorwa zvinyorwa zvakanyorwa muhukuru 11, zita racho rinosvika 20, uye mutsetse wechipfuu chakakura 16. Kunyange zvazvo izvi zvingava zvakadaro, hazvisi nyore.
Kuchinja ukuru hwefaira chete hazvienzanisi ne musoro wekutema.
Kana iwe uchitarisa chinyorwa chekushandisa cheji, iwe uchaona zvandinoreva.
Kona pakarurama pane peji ipi yewebhu kuitira kuti uone ikhodi yekodhi. Ichokwadi, iwe unogona kuzviita neuri kuverenga iye zvino. Zvadaro tora "kuona peji peji" uye ichakuendesa kune code code. Hezvino izvo zvinotaridzika seVatangi vekutungamirirwa kuKutengesa kweIndaneti.
Kuwana iyo mavara h mumutsetse wekodhesi yakafanana nesingano mune tsvina. Saka shandisa "murairo + f" pane zvaunobatsira. Zvadaro tsvagai h1, h2, h3, nezvimwe ...
Ndakataurira ma tag kuti aite pachena.
Sezvaunogona kuona, matanho eH1 akashandiswa kwechinyorwa, uye tambo yeH3 yakashandiswa pamusoro pekutanga pasi peji.
SEO kukosha kwemusoro wematekisi
Iye zvino ngatitorei kuti matanho ekutungamirira anoshanda sei ne SEO. Nenzira, apa pane imwe musoro musoro (pamusoro) wandakashandisa pane iyi chidimbu.
Pakave nekukakavadzana kwenguva yakareba pakati peSOO nyanzvi pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwekutonga mathesi zvechokwadi kune SEO.
Iwe haugone kuenzanisa kukosha kwavo kune zvinhu zvakadai sechiremera chemasimba kana backlinks, asi kutumira mathesi kuchiri kukonzera chimwe chinhu mukutsvaga kwako kunyoresa. Ndizvo zvavanoita kuti zvive nyore kune injini yekutsvaga kuverenga nekududzira zvinyorwa zvako.
Kana iwe uchinge uine masvingo makuru ezvinyorwa pasina zvinyorwa zvitsvuku, zvichave zvakaoma kumabhoti kuziva kuti peji yako iri chii.
Izvi zvinogona kuenzaniswa nehuwandu hwehutano hwewebsite yako zvakare.
Kungofanana neimba yako yepamusoro uye zvinyorwa zvepamusoro-soro zvine hutungamiri hunoita kuti zvive nyore kune vanogadzira mapepa kutarisa mapeji, mhete dzinotungamirira dzinotsanangura kukosha kwemisoro dziri papeji.
Pasina misoro, uri kuvimba pane zvinotsvaga kutora zvese zvemashoko ako pane imwechete yemaziso, izvo zvisingabatsiri kutsvaga kwako.
John Mueller, mutungamiri mukuru webmaster trends kuGoogle aive akataurwa achitaura kuti Google inoshandisa matanho H kuti inzwisise chimiro chemashoko pane peji.
Saka zvakajeka kuti vanopa imwe SEO kukosha.
Uyezve, kutsvaga kubva kune Hook Agency inoratidza zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvezvinhu pa-peji SEO.
Zvimwe zviviri zvepamusoro gumi zvine zvinhu zvakabatana nemusoro wako.
Ndakawana zvimwe zvidzidzo zvepamusoro zvakanyanya pahutaneti izvo zvinotsigira izvi kudai zvakare. Heino imwe yezvandinoda zvakarongwa Tsvaga Eccentric.
Chidzidzo chacho chiri nekambani inonzi Motorcars Ltd.
Vanga vari mubhizimisi kwemakore anopfuura 40, asi munguva ye digital, vakanetseka kuti vakwanise kutsvaga injini dzemashoko avo. Mushure mokuongorora webhusaiti, zvakajeka kuti pane zvakawanda zvaigona kuvandudzwa.
Chimwe chezvinhu zvavakashandura chakanga chiri kuwedzera H1 nematemu eH2 panzvimbo iyi.
Chinangwa cheizvi ndechekuvandudza kuonekwa uye kuita zvinyorwa zvinowedzera SEO friendly; zviri nyore, zvakarurama? Tarisa mhinduro dzemigumisiro yemazano aya.
Kuchinja kwacho kwaiva nemigumisiro yakawanda pamigumisiro yavo yekutsvaga.
Mushure mokunge matheji ekutanga akawedzerwa, kambani yakabata nzvimbo yepamusoro yepamusoro yezvinyorwa zviviri zvadzo zvakakosha. Vakanga vane nzvimbo yepamusoro mitatu yezvishanu zvemashoko makuru.
Sezvaunogona kuona kubva pane chati, vakagumisa mazana ematunhu.
Iye zvino, zvose izvi hazvikwanisi kuverengerwa kune tema tema oga. Vakabvisawo vakafa vakafa uye vakagadzirisa dzimwe nyaya dzekufamba. Asi mabheti ekutungamirira zvechokwadi akaita basa guru mukubudirira kwavo.
Musoro wekutumira matambudziko kunoshandisa sei unyanzvi hwevashandi
Mukuwedzera kune SEO mafaro ekutungamirira ma tags, kuwedzera izvi kune yako nzvimbo inozobatsirawo kuvandudza ruzivo rwevashandi.
Somugumisiro, uchawana mamwe magwagwa panzvimbo yako, nekudzokorora kakawanda vashanyi, uye vanhu vachagara pawebsite yako kwenguva refu. Izvi pamwe chete zvinowedzera zvimwe SEO kukoshawo zvakare.
Ko kutungamira tema kunobatsira sei vashanyi pawebsite yako?
Kana uchitanga, zvinongogadzira zvigadzirwa zvako zvakachena uye zvakarongeka. 43% yevanhu vanoti ivo vanoongorora mabhuku e blog. Iwe unofanirwa kuita kuti zvinyorwa zvako zvive nyore kuverenga nekuwedzera misoro.
Tora iyi chinyorwa iwe uri kuverenga iye zvino semuenzaniso.
Ngatiti iwe watoziva kuti chii chinyorwa chakatangira usati watanga kuverenga. Iwe ungasafunga kuti zvakakosha kuverenga chikamu chokutanga. Zvingava nyore kwazvo kuti iwe urege kutsika pamusoro payo nokuti ma tags akajeka.
Asi kana ndikabvisa mabhuku ose kubva pamusana, zvingaita rusvingo rukuru rwemavara zvakanyanya kuoma kuverenga. Heino muenzaniso kuti ndikuratidzei zvandinoreva.
Izvi hazvikwanisi, uye inongova imwe chete yemapeji mashomanana mumutauro wakafanana.
Iye zvino, regai titarise mumwe muenzaniso, nguva ino bedzi nekutumira mathesi anoshandiswa Kutendeuka XL.
Izvi zviri nyore nyore kuverenga, uye zvinotaridzika zvinonakidza.
Iye zvino, zvinokwanisika here kuita izvi zvakafanana nekuita kuti mhando yacho iwedzere uye yakasimba? Ichokwadi, asi sei iwe usingakwanise kushandisa zvinyorwa zvinyorwa kuitira kuti SEO ibatsire zvakare?
Kana iwe uri kushamisika kana aya ari chaiwo misoro tags kana kuti teta yakakura, ndakaongorora code yekuratidza.
Sezvaunogona kuona, vakashandisa H2s uye H3s nokuda kwechikamu ichi chemashoko. Kunyange zvazvo isina kufananidzwa mumufananidzo uyu, terefu yeH1 yakashandiswa pachirongwa.
Ita ma tape maitiro akanaka
Iye zvino zvaunoziva chikonzero nei iwe uchida kuwedzera misoro yepamusoro pane webhusaiti yako, ndichapfuura mune dzimwe nzira dzakanakisisa dzekutevera.
Chimwe nechimwe chimiro chakanakisisa pane zvandinoverenga ndechekuti ndive nemusoro wemusoro zvakare. Iwe uchaona zvandinoreva kana uchiramba uchiverenga.
Ingoshandisa chete imwe H1 tag peji
H1 tags dzinofanira kuponeswa nekuda kwezita.
Nokutadza, zita rekutsvaga kwako rinofanira kunge rakangoerekana riri H1. Asi iwe unogona kuona peji yekodhi yekodhi uye mharidzo yegwaro kuti uone kuti.
Kana pane chimwe chikonzero ichocho kwete, iwe unogona kuwedzera mauri iwe pachako.
Pfungwa iyi ndeyokuti tag H1 ndiyo inonyanya kukosha. Kuwedzera zvinopfuura rimwe chete hakungori zvishoma zvishoma zvinooneka zvakashata, asi zvinogona kunge zvichinyonganisa vakwegura pavanenge vachirondedzera zviri mukati mako.
Shandisa mazwi ezvisikwa mumusoro
Kana zvichibvira, iwe unogara uchitsvaga kuva nemashoko ekukosha mumusoro wako.
Zvisinei, ndeyekusaziva kwakajeka kuti mazita ose ekutevedza anofanira kushandiswa nemashoko makuru. Izvo hazvisi izvozvi.
Sezvo nezvose zvese zvaunogadzira, zvinyorwa zvinoda kuva zvisikwa uye zvinoverengwa. Kana iwe ukagona kuwana mamwe mazwi mukati umo, izvi zvakanaka. Kana zvisina kudaro, usaedza kumumanikidza.
Chinhu chikuru chekuwana mazwi ekuisa mumusoro wako ndeGoogle. Ingorinyorera kusvika pasi peji uye tsvaga kutsvaga kwakafanana.
Ngatiti iwe wakanga uchinyorera zvinyorwa zvebhokisi pamusoro pezvibereko zve yoga. Hezvino izvo zvinotsvakurudzwa zvakafanana zvinoita sezviri.
Aya mazwi makuru anogona kuva maH2 kana H3s emashure ako.
Iwe haugoni kuisa "zvinyorwa zve Wikipedia yegaga" mune rimwe remusoro wako, nokuti hazvisi zvisizvo uye hazvina musoro. Asi zvinhu zvakaita yoga zvinobatsira vanhu, zvigaro zve yoga mangwanani, kana kuti kuwedzera maitiro e yoga zvingava zvakakodzera sei.
Shandisa ma tate zvakanyanya
Vamwe vanhu vachakuudza kuti ushandise misoro yepamusoro zvishomanana, asi ini ndinofunga kuti iyo imwe pfungwa isina kururama.
Handive kuti iwe unofanira kunge uine dzimwe mimwe mitambo, asi shandisa iyo sezvaunoona yakakodzera. Kana chinyorwa chichitsvaka zvitatu, shandisa zvitatu. Kana inoda 10 kana 20, zvino shandisa 10 kana 20.
Muzviitiko zvakawanda, nguva yakareba yakasarudzwa ndeye, iyo inowedzera misoro iwe unogona kushandisa.
Heanoi mamwe mashoko kubva kuna John Mueller kuGoogle. Anoti iwe unogona kushandisa mazita akawanda akadai sezvamunoda.
Zvakare, ndaizoramba ndakanamatira chete neH1 tag. Asi nokuda kweH2, H3 (nezvakadaro), shandisa zvakawanda sezvaunoda.
Muzviitiko zvakawanda, handigoni kudiwa kuenda kunze kweH3 kana H4. SEO parutivi, ndinofunga kuti zvakaoma zvikuru kune muverengi. Saka tsvaga dzimwe nzira dzekugadzirisa zvinyorwa zvako pane.
Iwe unogona kushandisa nguva dzose ushingi kana itariki kuti usimbise chimwe chinhu, kusiyana nekutora nzira yose kuenda kuH6.
Mheteti mawere ndeyekunyengera, asi ane simba, SEO hack.
Mukuwedzera pakuratidza zvinhu zvakakosha zvekutsvaga injini yekugadzira, vanoita kuti zvive nyore kune vashanyi vepawebhusayithi kuti vashandise zviri mukati peji rako.
Ndinokurudzira zvikuru kuwedzera kuwedzera misoro kumataurirwo ako. Sezvaunogona kuona kubva mubhuku iri, ndinovashandisa nguva yose.
Saka shandisa iyi chinyorwa sekutaridzirwa kwekushandisa mitemo yekutevera uye kutevera zvakanakisisa maitiro.
Pa-Peji SEO 101: Matipi eKiyi Kiyi Kugonesa Iwo Akanyanya Kukosha Zvikamu zveWebhusaiti Yako
Blog SEO: Nzira Yokutsvaga Engine Inogadzirisa Sei Zvigwaro Zvako
15 inoitisa SEO matipi ekuvandudza yako yekutsvaga mayadhi
Akanakisa SEO Zvishandiso Kuti Ubatsire Iwe Tsvaga, Ongorora & Gadziridza Mazwi Akakosha
SEO yeRoofing Kambani: Iyo Yekupedzisira Nongedzo kune Roofing SEO
2020 SEO Basics Chinongedzo: Izvo Mazuva ano ma SEO anofanira kuve Akanyatso-Kuziva?